Video: Wadaad Sacuudiyaan ah Oo soo saaray Fatwo Fuxshi u horseedaysa Muslimiinta.
Thursday June 20, 2019 - 18:05:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mid kamida wadaadada ugu caansan dalka Sacuudiga ayaa soo saaray Fatwo dad badan ka yaabisay oo dhalinyarada faraysa in ragga iyo dumarka ay isdhax boodaan.
Mid kamida wadaadada ugu caansan dalka Sacuudiga ayaa soo saaray Fatwo dad badan ka yaabisay oo dhalinyarada faraysa in ragga iyo dumarka ay isdhax boodaan. isbedelka laga hirgeliyay Sacuudiga ee dhanka calmaaniyadda loo qaaday ma ahan mid halmar dhaqan galay ee wuxuu soo maray maraaxil kala duwan waxaana hormuud u ah wadaada xumayaal diinkooda shilimaad ku bedeshay.
kuwa isugu yeeray hay'adda culimada ayaa fataawaad ku, nin lagu magacaabo Caadil Alkalbaani oo kamid ah wadaada xumayaasha ayaa fatwooday iyo ragga iyo dumarka ay qoob ka ciyaar ku sameeyaan xafladaha iyo isku imaatinada munkarka ah.
Alkalbaani oo mar soo noqday Imaamka Masjidka Xaramka ahna nin caan ka ah dhulka bilaadul Xarameyn ayaa sanadadii dambe lasoo ifbaxay diin xumo iyo in uu soo saaro Fataawaad baadil ah oo muslimiinta ugu yeeraya qaadashada dhaqamada reergalbeedka.
Halkan ka degso Video-ga Al Kalbaani oo Fatwoonaya iyo Ragga iyo dumarka ay qoob kaciyaar sameyn karaan
Daawo Video: Dowladda Shiinaha oo Tacdiibin cusub ugeysatay Muslimiinta Turkistaanta Bari.
Daawo Video: Macnaha guud ee Xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda.